Tovolahy iray 23 taona no nahavanon-doza tao amin’ny Kaominina Betsimisotra Distrikan’i Fandriana faritra Amoron’i Mania.
Zazavavy kely, 14 taona, no niharan’ny herisetra ara-nofo ny marainan’ny alahady 23 febroary 2020. Sendra irery tao an-trano io zazavavy io no niditra ilay tovolahy. Nisy nahita ny nidiran’ity farany, saingy tsy nisy nanampo na inona na inona satria fianakaviana avy amin’ny renin’ilay zazavavy ihany ity tovolahy ity.
Ny loza anefa dia ilay tovovavy efa tsy nisy aina intsony, voatampim-bava ary mifatotra tongotra aman-tanana efa tsy nisy aina teo ambony fandriana no hitan’ny olona. Maty nokendaina ilay zazavavy rehefa avy naolana.
Voasambotra ny androtr’io ihany ilay tovolahy, ary nentin’ny Zandary nakao Fandriana renivohitra androany, nanohizana ny famotorana. Rahampitso talata no hatolotra ny fampanoavana eny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Ambositra ny raharaha.